आज फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? — Sanchar Kendra
आज फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाण्डाै । पछिल्लो केहि समय उकालो लागेको सुनको भाउ हप्ताको पहिलो दिन घटेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा ९२ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
अघिल्लो हप्ता सुनको भाउ तोलामा २२ सय रुपैयाँले बढेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै भाउमा उतार-चढाव आएकाले नेपाली बजारमा पनि भाउ तलमाथि भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । आज चाँदीको भाउ भने स्थिर छ । अस्ति शुक्रबार जस्तै आज पनि चाँदी तोलामा १२ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यसैबीच कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण आठ महिनादेखि बन्द कैलालीकै मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको टीकापुर पार्क खुल्ला गरिएको छ । आन्तरिक पर्यटकका लागि महत्वपूर्ण मानिने टीकापुर पार्कमा वार्षिक दुई लाखभन्दा बढी पर्यटकले पार्कको अवलोकन गर्दै आएको तथ्याङ्क नगरपालिकासँग छ ।
लामो समयदेखि टीकापुर पार्क खुल्ला गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आए पनि नगरपालिकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर पार्क खुल्ला गरिएको बताइएको छ । नयाँ वर्ष र दशैँतिहारको समयमा पार्क अवलोकनमा आउनेको घुइँचो लाग्ने गरेको भए पनि यो वर्ष सो अवधिमा पार्क सुनसान रह्यो ।
नगरपालिकाको वार्षिक ५० लाख रुपैया आम्दानी हुने पार्कबाट गत वर्ष रु २० लाख पनि आम्दानी हुन सकेन । झनै यस वर्ष त त्यति पनि आम्दानी हुने अवस्थामा नदेखिएको पार्कमा कार्यरत विनोद चौधरी बताउँछन् । नयाँ वर्ष र दशैँतिहारको समयमा मात्रै पार्कले रु २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको छ ।
पार्क खुल्दा त्यस क्षेत्रका व्यवसायी पनि खुशी भएका छन् । पार्क छेउमा होटेल व्यवसाय गर्दै आएका अर्का रेष्टुराँका सञ्चालन रवीन्द्र विष्टले व्यवसाय पहिले नै सञ्चालन भए पनि पार्क बन्द हुँदा आफूहरूले व्यवसाय बन्द गरेजस्तै रहेको बताए ।
‘अब पार्क खुल्दा केही आशा देखिएको छ । यसअघि साउको र बैंकको ब्याजसमेत तिर्न सक्ने अवस्थामा थिएन,’ विष्टले भने, ‘पहिले यो मौसममा दैनिक रु एक लाखसम्मको व्यापार हुन्थ्यो । अहिले सुनसान छ तर पनि लामो समय पछि पार्क खुल्दा अब केही आश थपिएको छ ।’ पार्कको अवलोकन समय बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म खुल्ला गरिएको जनाइएको छ ।